स्यान पेड्रो डे अल्कान्टारा, कोस्टा डेल सोल मा एक खजाना Absolut यात्रा
Absolut यात्रा | | España
ब्रह्माण्डको मार्बिलासँग एकदमै नजिक अवस्थित स्यान पेड्रो डे अल्सिन्टाराले विपरित प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यो हो, एक विशिष्ट स्पेनिश शहर को शान्ति। यसको जग तुलनात्मक रूपमा भर्खरको हो किनकि यो १ 1860० मा मार्क्विस डेल डुएरोको कृषि उपनिवेशको रूपमा जन्मेको थियो, जुन यो समयको सब भन्दा उन्नत हो।
हाल मालागा सहर यसको सेता घर र the thirty हजार भन्दा बढी जनसंख्याको जनसंख्यामा सबै सामान्य सेवाहरूको लागि बाहिर खडा छ। जहाँसम्म, केवल एक सय पचास वर्ष पहिले स्थापना भएको भए पनि, यसले तपाईंलाई धेरै चाखलाग्दो स्मारकहरू प्रदान गर्दछ र प्रकृति आनन्द लिनको लागि भव्य वातावरण पनि।
1 स्यान पेद्रो डे अल्सिन्टारामा के हेर्ने
1.1 भेगा डेल मार्को पालेयो-क्रिश्चियन बेसिलिका
1.2 लस Bóvedas को रोमन स्नानहरू
1.3 सैन पेड्रो डी Alcántara को चर्च
1.4 सैन लुइस को विला
1.5 Guadaiza मिल
1.6 मादक पदार्थ
2 स्यान पेड्रो डे अल्सिन्टारामा गर्नका लागि
3 स्यान पेद्रो डि Alcántara मा मौसम
4 स्यान पेड्रो डे अल्सिन्टारामा के खान गर्ने
स्यान पेद्रो डे अल्सिन्टारामा के हेर्ने
मालागा जनसंख्या धेरै स्थानहरू छन् जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ, बाट पुरातात्विक अवशेष पेलियोक्रिस्टियन र रोमन भवनका लागि जुन भाग हुन् औद्योगिक वास्तु सम्पदा। र अन्य धेरै धेरै रोचक स्मारकहरू।
भेगा डेल मार्को पालेयो-क्रिश्चियन बेसिलिका
तपाईंले यी अवशेषहरू गुआदाल्मिना नदीको मुखमा पाउनुहुनेछ, जुन क्षेत्र रोमन हर्कुलियन सडक पार गर्ने ठाउँमा बस्थ्यो Cádiz र कार्टेजेना। हाल, बेसिलिकाको योजना मुश्किलसँगै सुरक्षित गरिएको छ, तीन नाभाहरू र दुई बिरूद्ध विपरीत एपिसको शरीर देखाउँदै। यो XNUMXth र XNUMXth शताब्दी ई.स. बीच बनाइएको थियो र को शहर को भाग भएको मानिन्छ सिल्लिआनाको को अस्तित्व को, तथापि, कुनै प्रमाण छ।
त्यहाँ नेक्रोपोलिस पनि थियो। अर्कोतर्फ, यी अवशेषहरू (टमस्टोन, भाँडाहरू, गहना र चिहानका सामानहरू) सँगै भेटिएको सम्पूर्ण सम्पदा म्याड्रिडको राष्ट्रिय पुरातत्व संग्रहालयमा छ। बेसिलिका छ ऐतिहासिक स्मारक 1931 बाट।
लस Bóvedas को रोमन स्नानहरू
तपाईं बेसिलिकामा जानुहुँदा तपाईं उनीहरूलाई भेट्न फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरू यसबाट केवल पाँच सय मिटर मात्र छन्। यो अष्टभुज भवन हो, आठ कोठाहरू बीचको कोठाको वरिपरि, र ईसाई पछि दोस्रो र तेस्रो शताब्दी बीचको मिति हो।
यो बलियो क concrete्क्रीटमा निर्माण गरिएको हो त्यसैले यसले समयको परीक्षणको तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग सामना गर्न सक्छ। थप रूपमा, यसको विचित्रता यो छ कि यसको सिलि vहरू पनि घुमाइएको छ। सन् १ 1936 .2007 देखि यो एक राष्ट्रिय स्मारक हो र २०० since पछि सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति.
अर्को तर्फ, तातो स्प्रि toको छेउमा तपाईंले एक फेला पार्नुहुनेछ बिकन टावर उत्तर अफ्रिकाबाट समुद्री डाकूहरूको समुद्री किनारमा आएका समुद्री डाकूहरूको नियन्त्रणलाई नियन्त्रण गर्ने चौकीदारहरूको भागको रूपमा १ the औं शताब्दीमा निर्मित। यसको उचाई तेह्र मिटर छ र यसको आधार आठ व्यास छ।
सैन पेड्रो डी Alcántara को चर्च
१1869 XNUMX in मा उद्घाटन गरियो, यसले प्रतिक्रिया जनाउँछ औपनिवेशिक शैली र यसमा प्रिज्म-आकारको टावरको पोर्च्युचेलो डे एन्टेकराको सम्झना दिलाउने एक विचित्र अद्भुतता छ। यसमा बासिलिका योजना रहेको छ र ती केही भवनहरू मध्ये एक हो जुन मौलिक कृषि उपनिवेशबाट बाँकी छ जसले वर्तमान जनसंख्यालाई वृद्धि दियो।
सैन लुइस को विला
यसको निर्माण १ 1887 देखि कुआदरा राउल परिवारको घरको रूपमा छ, जसले १ony1874 the मा उपनिवेशको स्वामित्व प्राप्त गर्यो। यो उत्सुकता हो किनकि यसको अन्डालिसियन शैलीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। बरु, यो प्रतिक्रिया गर्दछ Frances त्यो समयको। योसँग आयताकार फ्लोर योजना र तीन हाइटहरू छन्। छत लुकाइएको छ र यसको मुनि तीनवटा डोरोररहरू छन्। तपाईले यस भवनलाई सजिलैसँग पाउनुहुनेछ किनकि अब यो मेयर अफिसको सिट हो।
पुरातात्विक अवशेषहरू बाहेक जुन हामीले तपाईंलाई बुझाइदिएका छौं, यो सायद पेनड्रो डे अल्सेन्टाराको सबैभन्दा पुरानो निर्माण हो किनकि यो उपनिवेशको स्थापना हुनुभन्दा अघि निर्माण गरिएको थियो। विशेष रूपमा, यो १1823२XNUMX बाट हो र यसको कार्य चिनी बनाउनु थियो। यद्यपि यो पछि समर्पण गरियो फार्म-मोडेल, कृषि फोरमेनका लागि स्कूल जुन स्पेनभरि अग्रगामी थियो।
यो भनिनु पर्छ कि यस क्षेत्रमा यसको खेती गरिएको छ चीनी शताब्दीयौंदेखि यो युरोपमा केहि स्थानहरू मध्ये एक हो जहाँ यस बोटको लागि उपयुक्त अवस्था अवस्थित छ। आज तपाईंले यस भवनमा सांस्कृतिक केन्द्र पाउनुहुनेछ।
यस क्षेत्रमा चिनी प्रशस्त मात्रामा भएकोले उपनिवेशले १ dis1871१ मा यस डिस्टिलरी स्थापना गर्यो। वास्तवमा यसले पदार्थको आफ्नै गुडबाट ब्रान्डी बनायो। भवनमा आयताकार नेभ र एउटा अग्लो टावरको हुन्छ। तर सबै भन्दा माथि, यसको मुखौटा, सेतो र निलो टाईलको सीमा लगायतका साथै अन्य राहतहरूमा सजाइएको।
स्यान पेड्रो डे अल्सिन्टारामा गर्नका लागि
मालागा शहर एक सुन्दर छ समुद्र तट जहाँ तपाईं सूर्य र समुद्रको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै, त्यहाँ एक छ promenade लगभग चार किलोमिटर लम्बाइ जुन पोर्टो बानिससँग जोड्दछ र जसमा तपाई धेरै एनिमेसनको साथ असंख्य बार र रेष्टुरेन्टहरू पाउनुहुनेछ।
तर, यदि तपाईं हिड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो बोउलभार्डको छेउमा वा Parque de लॉस Tres Jardines मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै भन्दा माथि, तपाईं छ सियरा ब्लांकामा उत्कृष्ट पर्वतारोहण ट्रेल्स। उदाहरण को लागी, एक जुन क्रुज डे जुआनर मा जान्छ, लगभग XNUMX मीटर उचाई, र एक जो La Concha चुचुरोमा जान्छ।
स्यान पेद्रो डि Alcántara मा मौसम
दुबै शहर र सम्पूर्ण मार्बेल्ला क्षेत्र एक छ subtropical भूमध्य जलवायु, धेरै हल्का जाडो र तातो गर्मी संग। वर्षा धेरै कम छ र वार्षिक औसत तापमान लगभग १teen डिग्री सेन्टिग्रेडको छ। यसको अंशको लागि, एक वर्ष घामको घण्टा प्रायः तीन हजारमा पुग्छ। त्यसकारण कुनै पनि समय तपाईलाई मालागा शहर मा यात्रा गर्न को लागी राम्रो छ, जबकि सबै भन्दा राम्रो महिनाहरु को हो जून र सेप्टेम्बर, जब मौसम राम्रो छ तर जुलाई वा अगस्त जस्तो तातो छैन।
स्यान पेड्रो डे अल्सिन्टारामा के खान गर्ने
यस क्षेत्रको ग्यास्ट्रोनोमी बाँकी कोस्टा डेल सोल भन्दा धेरै फरक छैन। तटीय क्षेत्रको रूपमा, यसको भाँडामा आधारित छन् ताजा माछा। यसको तयारीको लागि, त्यहाँ दुईवटा साधारण डिशहरू छन् जुन तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ। एउटा हो "तारेको माछा, जो anchovy, घोडा मैकेरल र रातो mullet कच्चा मालको रूपमा लिन्छ। र अन्य सार्डिन स्कीवर, जो एक स्टिकमा सम्मिलित गरेर र बोनफायरमा भुनाएर तयार गरिन्छ।
गाजापाचो पनि स्थानीय खाना हुन्। साल्मोरेजो र ajoblanco। पछिल्लो एक चिसो सूप हो जसले पानी, जैतूनको तेल, लसुन, नुन, रोटी र बदाम समावेश गर्दछ। कहिलेकाँही यसमा सिरका पनि थपिन्छ र यो प्राय: तरबूज वा अंगुरका टुक्राहरूसँगै खाइन्छ। मिठाईहरूको रूपमा, तपाईंले तेलको केक, बोराच्युलोस र वाइन रोलहरूको स्वाद लिनु पर्छ।
अर्कोतर्फ, मालागा शहर मा एक छ रेस्टुरेन्टहरूको ठूलो संख्या यसले तपाईलाई स्थानीय खाना मात्र प्रदान गर्दैन। तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय खाना र सबैभन्दा आधुनिक ग्यास्ट्रोनमीमा आधारित भान्सेहरू पनि स्वाद लिन सक्नुहुनेछ।
निष्कर्षमा, त्यहाँ धेरै छ जुन स्यान पेद्रो डे एल्कन्टाराले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्नुपर्दछ। तपाईंले मालागाको यो मनमोहक ठाउँको भ्रमण गर्ने मौका गुमाउनु हुँदैन। कोस्टा डेल सोलमा मिजाज जस्ता अरू प्रसिद्ध शहरहरूबाट कुनै कुराले अलग्गै गर्नु हुँदैन। नेरजा, Fuengirola, Benalmádena वा Torremolinos।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » सान पेड्रो डी अल्काटारा